Iphupho Ngemuva kweLucidPix
UHan Jin wakhulela eJalimane, enomndeni emhlabeni wonke. Namuhla, indawo yakhe yokuhlala eseCalifornia, futhi ukuxoxa ngempilo yakhe kanye nokuhlangenwe nakho nomndeni emhlabeni wonke kuye kwaba yinto ayephupha ngayo kusukela esemncane. Noma kusuka ezinkulungwaneni zamamayela ngokuhlukana, akufanele yini kube nendlela yokuxhuma ngokuhlangenwe nakho kwawo? Lo mbuzo uvuse ukuthuthukiswa kweLucidPix.
Njengoba amapulatifomu edijithali esusiwe, uJin wayazi ukuthi kunezindlela eziningi zokuxhumana kangcono nabathandekayo. ULucid waqala ngekhamera ye-3D. Kwakuyinto enhle yobunjiniyela, kepha uHan washeshe wathola ukuthi abantu abaningi abafuni ukuthatha isikhathi basebenzise umshini ohlukile ocingweni lwabo ukudala izithombe nevidiyo ye-3D. Umqondo uvele waba yisipiliyoni sokuntywila se-3D, ngokususelwa ngokuphelele ku-smartphone osuvele ungumnikazi wayo. Isipiliyoni seLucidPix siphuma kusikrini sakho, sikwenze uzizwe sengathi ungangena nje ezithombeni futhi ubekhona nomndeni nabangane. Lona umgomo weLucidPix… abasebenzisi bangathola futhi bahlanganyele ngalokho abathandekayo babo ababhekene nakho nabakuzwayo. Ngenxa yalokhu, uLucidPix udlulela esidlule kuleyo modiane, izithombe ezi-2D ezibucayi futhi evula izwe elisha lokuthungwa nemizwelo.
Ngamaqiniso, iphupho likaJin lokuzizwa esondelene nomndeni wakhe selifezekile. Uhlelo lokusebenza luzokwethula ngokusemthethweni ngabasebenzisi abangaphezu kwesigidi — bonke abakwazi ukwaba nabanye, nomndeni, nabangane. Kusuka kokuya ngasendle kuye ezikhathini ezinokuthula, izithombe uLucidPix osiza ngazo ukudala imiqondo yokukhuluma ezweni elifisa ukusebenzisana.
I-LucidPix iyatholakala manje ukulanda i-Android ne-iPhone esitolo se-Play kanye ne-iOS mahhala. Uhlelo lokusebenza linikeza ukuguqulwa kwesithombe okungenamkhawulo kwe-3D nokuhlela, ukufinyelela okukhethekile komphakathi weLucidPix, kanye nokwabelana kuzingosi eziningi zemidiya yezokuxhumana nemiyalezo, ngezibuyekezo ezingaphakathi nohlelo ezivula uhla lwezinto ezithuthukisiwe zokubhalisela okungabizi kakhulu kwanyanga zonke noma ngonyaka.
Ungayisebenzisa Kanjani Ikhodi Yakho Yokukhuthaza yeLucidPix ye-iPhone ne-Android →← Ukunyusa ngeLucidPix nokumaketha Imikhiqizo yakho